१७९२ पल्टसम्म भगवान बुद्धले गर्नु भएको कुरा | BodhiTv
१७९२ पल्टसम्म भगवान बुद्धले गर्नु भएको कुरा
#सील बिग्रियो भने समाधि बिग्रन्छ, समाधि बिग्रियो भने सहि भएको जस्तो छ त्यस्तै गरी सत्य यथार्थलाई देख्न सकिने छैन।
सील बिग्रिनु (भाँच्चिनु) नै सबै बिग्रनु को आरम्भिकता हो। चार प्रकारका कारण जुटेर आएको समय (सम्बद्ध = एक समयमा पर्न आउनु) मा रुप उत्पन्न हुन्छ। चार प्रकारका कारण जुटेर आएको समय अन्त हुने बेलाकै साथ साथमा रुप पनि बिग्रिएर जान्छ। चार प्रकारका कारणहरु भन्नाले कर्म, चित्त, ऋतु, आहार हरु हुन्।
आरम्मण र द्वार ठोक्किँदा (जुटेर आउँदा) नाम उत्पन्न भएर आउँछ। आरम्मण र द्वारहरु बिग्रिएर जाने समयमा पनि तुरुन्त साथ साथै नाम बिग्रिएर जान्छ। जौनो सुकै चित्त उत्पन्न नै किन नहोस् आखिर उत्पन्न भै हुने वित्तिकै बनेर बिग्रिएर जान्छ। आगे बाट जौनो चित्त उत्पन्न भएर आएको हुन्छ त्यस लाई पछि बाट हुने चित्त ले देख्न सक्ने गरि चिन्तन मनन् गरेर हेर्नु पर्दछ। आगाडी बाट जे जसो जस्तो सुकै घटेको चित्त छ त्यस लाई पछि बाट हुने चित्त ले जानी दिनु पर्दछ।
पूर्व (अगाडि) बाट भएर आएको नाम लाई पछि बाट हुने ज्ञान ले देखेर भेट्ने गरि पच्छ्याउँदै चिन्तन मनन् गरेर हेर्नु पर्दछ। सम्पूर्ण चार आर्य सत्यले नै आफुलाई प्राप्त भएको यस खन्ध लाई आधारभूत लिएर भेटेको (छोएको) हुन्छ। अथवा समावेश भै फैलिएर भरिएको हुन्छ। पञ्च मार्गले ध्यान अभ्यास आचारण गरिरहने भएको व्यक्ति को लागि अरुण उदय भएर चडि नै रहेको व्यक्ति हो।
संसार भवचक्र बाट छुट्कारा हुनको लागि सत्य धर्म देशना श्रमण गर्ने, सत्य धर्म संग सउचित तप अभ्यास आचारण गर्ने, सत्य धर्म देशना हरु लाई सहि उपदेश गर्न सक्नु हुने गुरुहरु संग जम्काभेट भएको सुलाभ समय संग पनि भेट हुनु, सुन्न सक्ने ज्ञान भएको कान पनि छ भने, सत्य सहि प्रकारले ठिक सउचित तप अभ्यास आचारण गर्ने आफ्नो अब निजी गर्नु पर्ने काम मात्र हो अथवा गर्नु पर्ने काम मात्र रह्यो, गृहस्थी (छोरा, छोरी, पत्नी घर परिवार) र आर्थिक बिषय को काम कार्य पुरा सम्पन्न हुने समयको बेला भयो।
धर्मको ज्ञान बिषय बारेमा सहि बुझ्न जान्नु सक्नु पनि कठिनाइ भए जस्तै, जाने बुझे अनुसार सहि अभ्यास र आचारण गर्न पनि कठिनाइ छ। धर्म भनेको नै सत्य हो। सत्य होइन भने धर्म पनि हुँदैन। राम्रो गरे राम्रो हुन्छ, र राम्रो को फल राम्रो मिठो सुखमय भए जस्तै, नराम्रो गरे नराम्रो हुन्छ र उस्को फल पनि कडा र नमिठो दुःखमय हुन्छ। अवश्य कारण कार्य जुटेर आएको समयमा उस्को फल स्वरुप ले उस्को फल दिने हुन्छ।
यो चाहिँ धर्म, यही नै सत्य हो। धर्म एउटा समुदय, धर्म सहस्र समुदयो, एउटा लाई जाने सबैलाई जान्ने हुन्छ। यस संसार विस्वब्यापी नै आधारीत स्वामित्व (मालिक) आफ्नो निजी भन्नु केहि छैन यस्को अलवा मात्र सज्जन सत्पुरूष धर्म आफ्नो आधारभूत निर्धारीत निजी छ।
आर्थिक व्यपार धनसम्पत्ति खोजी गर्दा दान गर्नको लागि हो भनेर खोज्नु। भएको धनसम्पत्ति लाई मात्र खर्च गर्न होइन दान दिनको लागि भनेर सम्हालेर राख्नु पर्दछ। आफ्नो स्वामित्व निजी भएको सबै नै दान दिनको लागि हो भन्ने मनले आर्थिक व्यपार गर्दा धन सम्पत्ति को खोजी गर्नु पर्दछ। यस प्रकारले गरिएको आर्थिक व्यपार को समय मा पनि कुसल बड्नेछ र प्राकृतिक स्वभाव सत्य धर्म लाई हेर्न जान्ने व्यक्ति ठहर्नेछ।
थोरै भन्दा थोरै भनेर पनि नराम्रो अकुसल हरु गर्न बाध्य हुन जान नपरोस्, थोरै मात्रामा हो भनेर पनि कुसल राम्रो काम गर्न नछोड्नु। चेतनाको स्तर उच्च भए भव (जीवन) को स्तर पनि उच्च महान हुनेछ। चेतनाको स्तर निच छ भने भव (जीवन) को स्तर पनि निच हुनेछ।
चेतना अनुसार नै कर्म हुनेछ, कर्म ले नै दुःखी र कर्म नै भएर धनी महाजन हुनेहो। अरुको सुख धन श्री सम्पत्ति ऐश्वर्या आदि लाई मच्छरिय चित्त नराखौँ। लोकमा राम्रो उत्तम आचारणगर्ने व्यक्तिहरुको बारेमा मनुष्यहरु अज्ञात भै नजानेको हुँदा देखा पर्न नआए तापनि, वहाँहरुको राम्रो शुद्धता सील लाई सम्मादेव नाथहरुले जान्न बुझ्न सकेका हुन्छन्। धर्म मुताबिक ठिक सउचित ज्ञानको काम गर्न सके मात्र हामीहरु को कर्म जीवनको इतिहास पाठ, नाट्य कार्य-शाला अन्त समाप्ति हुन्छ।
कुनै एउटा समस्या घट्यो भने मूर्ख व्यक्तिहरु ले अरुलाई लिएर आकृति स्वरुप लिने गर्दछन्। छली व्यक्तिहरु ले चाहिँ आफ्नै गल्ती कसूर हो भन्ने भन्छन्। धर्म स्वभाव बुझेर जान्ने व्यक्ति हरु ले चाहिँ कारण धर्मको बिषय ले कार्य धर्म उत्पन्न भएर आएको देख्न सक्ने हुन्छन्।
आफ्नो हृदय बाट क्लेश विकार हरु लाई जरै बाट हुने गरि उखेल्नु। आफुले आफैलाई चिनेर देख्न सक्ने आवश्यकता छ। आफुले गरिरहेको व्यवहार हरुले चाहिँ सासन गरेर यस मा फाइदा पु-याई रहेको छ ? सासन बिगार्ने हानि पु-याई रहेको छ ? सधैँ छानबिन गर्नु।
कहिल्यै पुरा नहुने अपूर्ण काम गरिरहने व्यक्तिहरु चाहिँ पृथक जनहरु नै हुन्, पुरा हुने गरि परिपूर्ण गर्न सक्ने व्यक्ति भएमा मात्र आर्य, धर्मको काम भन्दा आवश्यकता बडि महत्वपूर्ण काम केही छैन। सील नैतिकता सदाचार लाई अन्य मनुष्य देवताहरु ले पनि पहिलो प्रहार नै देख्ने बित्तिकै दुई हात जोडेर ढोग पुजा वन्दना गर्ने योग्य हुन्छ। सहि सत्य एउटै धर्म लाई बुझेर परिपक्व गरि निपुणता भए सबै कुराको योग्यता हुन्छ।
“योधम्मं पस्सद्धि, सोमं पस्सद्धि।
योपट्टिच्च समुप्पन्दं, सोमं पस्सद्धि।।
कारण कार्य लाई देख्न सके धर्म नै देखिएको हो। भगवान पनि पृथक जनबाट आर्य हुनु भएको नै हो।
सम्पूर्ण बाट परिपूर्ण हुनको लागि
परियत्ति, पट्टिपत्ति, पट्टिवेध तीनै वटा हरु लाई नै जोडेर साथमा बराबर एकीकरण गर्दै आचारणमा ल्यानुपर्दछ।
१७९२ पटक सम्म अतुलनीय भगवान बुद्धले उपदेश गरेर भन्नु भएको कुरा “सहि सत्यलाई यथार्थ रुपमा परिच्छेद गरेर जान्ने, आफुहरु लाई राम्रो ठिक शिक्षा दिनसक्ने गुरु आचार्य हरु लाई खोजी गरेर फेला पार्नु” भनेर भन्नु भएको छ।
कसैले कसैलाई पनि सुरक्षा गरेर बचाउन सक्दैन।
“अत्ताहि अत्तनो नाथो” आफुले मात्र आफैँलाई सुरक्षा गर्दै आफ्नो आधार लिएर सहि गुरु भेट्ने गरि खोजी गर्नु पर्दछ।
त्यस कारण धर्म लाई रुचि राख्ने धर्म प्रेमी कल्याण जनहरुले पनि गुरुलाई सम्मान आधारीत राख्नु गुरुको कुरालाई सधैँ मानेर पालन गरेर अभ्यास आचारण गर्दै लोक धर्मको स्वभाव अनुसार अन्तिम दुःख नमिल्दै पहिल्यैबाट तयारी, भय नआउँदै पहिल्यैबाट तयारी गर्नु, आफुले आफैलाई बचाउन सक्ने गरि अभ्यास आचारण गरेर उत्तम निर्वाणलाई प्राप्त गर्न सक्ने हेतु बनोस्।
अन्ध्यारो हटेर उज्यालो प्राप्त होस्।